Manao Diabe Ny Mpifindra Monina Mba Hitaky Fitovizan-jo Ao Brezila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Desambra 2012 15:31 GMT
Tamin'ny 2 Desambra, nidina an-dalambe ny fihetsiketsehana nokarakarain'ireo mpila ravinahitra monina ao São Paulo mba hitaky ny fananany zo fototra toy ny fahasalamana, fiarovana, sy asa mendrika. Niainga tao Praça da República, ao afovoan-tanàna ny Diaben'ny Mpifindra-monina VI ary nandalo teo anoloan'ny Lapan'ny Tanàna ao São Paulo, ka nijanona tao nandritra ny minitra maromaro ireo mpikarakara mba hanao kabary.
Amerika Latina sy mpiavy avy ao Afrika ny ankamaroan'ireo mpanao fihetsiketsehana, ary monina ao amina tanàna izay anaovan'izy ireo tolona hahazoana fitovizan-jo toy ny olom-pirenena teratany Breziliana. Lehilahy, vehivavy ary ankizy izy ireo izay nandositra ny fahantrana sy ny tsy fandriampahalemana tany amin'ny firenena niaviany ary manantena ny hanorim-ponenana sy hanan-trano ho azy ireo ao Brezila.
Na dia izany aza, matetika mivadika ho nofy ratsy izany nofinofy izany satria tonga hiatrika olana ireo olona izay sarotra ho azy ireo ny hahazo rariny tanteraka noho izy ireo vahiny mpila ravinahitra, indrindra raha tsy ara-dalàna ny nidiran'izy ireo tao Brezila. Miafara any anaty tambajotra izay mampiasa mpiasa vahiny tsy ara-dalàna ny sasany amin'ireo olona ireo, indrindra ny Boliviana, ka mampiasa azy ireo tahaka ny andevo: ora fiasana tafahoatra, karama farany ambany indrindra, tsy firaharahiana ny satam-piarovana sy ny ara-pahasalamana, ary fampiantranoana maloto sy hiboka olona.
“Olom-pirenena eto amin'izao tontolo izao aho”. Sary avy amin'i Juliana Spinola copyright Demotix (02/12/2012)
Manome fanoritsoritana mazava [pt] momba ity toe-javatra mangina miaro herisetra iainan'ny vahiny mpila ravinahitra maro ity ny bilaogy Pandora :
Amin'ny ankamaroan'ny distrikan'i São Paulo, sarotra ny mahita Boliviana mpifindra monina. Na dia izany aza, tsy mitsaha-mitombo mangingina isan'andro ny isan'ireo olona ao an-tanàna izay karazana teratany Indiana ary Espaniola vitsivitsy tsy araka ny mahazatra. Mitranga izany toe-javatra izany satria, amin'ny ankapobeny, ao amin'ny distrika afovoan-tanàna no misy ireo mpifindra monina ireo – indrindra fa tsy dia lafo ny fitafiana ao – ary na mihidy any amin'ireo orinasa ahitana asa mampidi-doza izy ireo, na mivarotra ny asa-tanany eny an-tsena. Izany no toe-javatra iainan'ireo Boliviana maherin'ny 200.000, izay ahitana mpifindra monina ara-dalàna sy tsy ara-dalàna, monina ao an-tanànan'i São Paulo.
Ny zava-misy dia na dia firenena nijoro tamin'ny fampiasana ny herin'ireo mpifindra monina aza i Brezila, ny andiam-bahiny betsaka nirodorodo farany dia tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20. Nanomboka hatreo, efa nisedra dona ara-toekarena marobe no nahatonga ny zava-misy ary nanjary firenena be mpandao i Brezila. Nahatonga ireo mpanao politika Breziliana nanao ankilabao ny asa momba ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny fifindra-monina izany, izay efa tamin'ny vanim-potoanan'ny didy jadona no nanaovana azy farany, ka lasa mampisy olana amin'ny fanatanterahana ny fifanekena momba ny fahahafahan'ny olona sy ny entany mivezivezy malalaka eo amin'ny firenena mpikambana amin'ny MERCOSUR, tahaka ny Faritra Schengen ao amin'ny Vondrona Eoropeana.
“Manitatra ny fjerinao izao tontolo izao ny fifindra-monina”. Sary avy amin'i Juliana Spinola copyright Demotix (02/12/2012)
Amin'izany lohahevitra izany, namoaka indray ny resadresaka [pt] mazava tsara niarahana tmin'ny mpandrindran'ny Foiben'ny Zon'Olombelona sy ny Zon'ny Olom-pirenena mpifindra-monina (CEDIC), Paulo Illes, ny habaka O Estrangeiro (Ny Mpivahiny) :
Ao Brezila manokana, manavakavaka tafahoatra ny sata mifehy ny vahiny, voalohany indrindra dia noho ny zava-misy fa vokatry ny “taonan'ny firaka” izany, [vanim-potoanan'ny famoretana mamaivay indrindra nandritra ny jadona miaramila tao Brezila], izay niheverana ireo vahiny ho toy ny fandrahonana ny fiarovam-pirenena, ary amin'izany foto-dalàna fahagola izany, izay misongadina amin'ny jadona sy ny tsy fisian'ny demokrasia, miankina amin'ny polisy federaly ny andraikitra rehetra amin'ny fomba fandraisana ireo mpifindra-monina.
Ny tsindrim-peon'ireo governemanta ao amin'ny vondrona Amerika-Atsimo mankamin'ny toe-karena kokoa ka manohintohina ny zon'ny tsirairay dia mampiseho ny lafy tsy dia niadian-kevitra loatra ao amin'ny MERCOSUR, izay raha ny tena marina dia fifanarahana momba fadin-tseranana fa tsy politika. Matahotra ohatra i Brezila fa raha vao misokatra amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny vondrona ny sisintaniny, dia mety ho tezitra ny sarangan'olona mahantra maro ao amin'ny taniny, ka hiteraka vesatra ho an'ny andrim-panjakany sy ny toekareny.
“Manan-jo hisafidy ny toerana tianay honenana izahay”. Sary avy amin'i Juliana Spinola copyright Demotix (02/12/2012)
Saingy tsy izay ihany. Sahiran-tsaina ihany koa ny governemanta Breziliana fa ny fametrahana rafitra momba ny fivezivezen'ny olona sy ny entany an-kalalahana dia mety hampidi-doza ny fandriampahalemana ao amin'ny fireneny izay mbola tsy vonona hiatrika izany. Ohatra iray ny mety hahatongavan'ireo mpamono olona na meloka izay mety hanararaotra ny lalànan'ny fifindra-monina ao amin'ny firenena mifanolo-bodirindrina, mba hanorim-ponenana ao Brezila.
Sarotsarotra kokoa ny mikasika an'i Bolivia, satria mpiara-miombon'antoka izy fa tsy firenena mpikambana ao amin'ny MERCOSUR, ary sokajiana ho lalana lehibe misokatra ho an'ny mpanao trafikan-drongony ny sisintaniny. Ka raha vantany tafiditra ao Brezila, dia hahita tsena goavana ho an'ny entam-barony [rongony] ireo “mpifindra monina” vaovao ireo, tsy lazaina intsony ny zava-misy fa mety hampiasa seranan-tsambo sy seranam-piaramanidina Brezilana izy ireo ho zotra hanondranana ireo rongony any Eoropa sy Etazonia .
Nidina an-dalambe ireo mpifindra monina ao Brezila mba hitaky ny zony sy fanatsarana ny lalàna mifehy ny fifindra-monina. Diaben'ireo mpifindra monina tao São Paulo. Sary avy amin'i Juliana Spinola copyright Demotix (02/12/2012)
Mbola lavitra ny lalana hodiavina mba hahatonga an'i Brezila ho Firenena mpandala ny Fahamarinana ara-tsosialy, saingy tsy azo ihodivirana. Raha te hitazona ny filaminana ao amin'ireo tanànany i Brezila sy te-hifandray tsara amin'ireo mpifanolo-bodirindrina aminy, dia tsy maintsy mihevitra momba izay haha-tompontanàna ny mpifindra-monina niditra ara-dalàna sy manaja mahaizy azy ireo. Amin'izany ihany koa, zava-dehibe koa ny fanohizana ny fanaraha-maso hentitra ireo izay miditra ao amin'ny firenena: tsy midika hoe mampialokaloka ireo mpamono olona sy meloka ny hoe firenena marina sy misokatra ho an'ny mpifindra monina.
Dingana mankamin'ny lala-marina ny fihetsiketsehana tahaka izao Diaben'ny Mpifindra-monina izao: mampahafantatra azy ireo amin'ireo Breziliana, mampiseho ny endrik'izy ireo, ny fomba fiteniny Portiogey, ny toerana onenany sy ny fomba fiveloman'izy ireo, ny fepetra mifehy ny asan'izy ireo, ary ny fanamafisana ny fikambanan'ny mpifindra-monina mba hitakiana ny zon'izy ireo mikasika ny lalàna. Ary farany, mampiroborobo ny fanentanana araka ny notsipihan'i Roque Patusso, mpandrindra ny Foibe Fanampiana ireo Mpifindra-monina (CAMI) tamin'ny resadresaka [pt] navoaka tao amin'ny bilaogy Bolíviacultural.com.bre:
Ny fahatsiarovan-tenan'ireo mpifindra-monina ihany no iray amin'ireo fandrosoana azo tsapain-tanana vita, izay singa afaka manova zavatra. Ny zavatra hitanay dia ny fitomboan'isan'ireo olona tonga manatevin-daharana ny diabe, ary koa ny fahatsiarovan-tena goavana eo amin'ireo olona ireo mikasika ny zony. Izany no tanjon'ny diabe, ny hampitombo ny fanentanana.